Iindaba-Iingcaphuno zeMarike yeTungsten yanamhlanje
Amaxabiso e-tungsten yasekhaya ahlala eqinile, kwaye iikowuteshini zinobundlongondlongo ngethemba lokunyuka kweemvakalelo kwimarike yezinto ezikrwada. Ngokutsho kwexabiso lekhontrakthi yentengiselwano yangempela yokuthengwa kwemihla ngemihla ye-Chinatungsten Online kunye nophando olubanzi lwabavelisi abahlukeneyo, ixabiso langoku le-black tungsten concentrate lingabonwa kwinqanaba eliphezulu le-102,000. I-Yuan/ton, imveliso ephakathi i-ammonium paratungstate (APT), eyona nto ingundoqo ekrwada yomgubo we-tungsten oncitshisiweyo, igxininiswe kakhulu kwiikowuteshini ze-tentative ze-154,000 yuan/ton.
Ngesi siseko, abavelisi basekhaya baye baphakamisa amaxabiso e-tungsten powder kunye ne-tungsten carbide powder; abanye abavelisi okwethutyana abazange babonelele ngamaxabiso, nto leyo eye yabangela ukunqongophala kweemarike okwethutyana; iiprosesa ze-alloy ezisezantsi ezibambe ii-odolo zijongene nokungabikho kwezinto eziluhlaza kunye nokunyuka okubukhali kweendleko. Ingxaki ephindiweyo. Icala lempahla ekrwada lisenokungabi yimeko yokunqongophala yokwenyani kwaye ukoyikeka okungenakuphepheka kwimarike kubangele ukuba zombini unikezelo kunye nomthengisi alindele ukuba imarike iphinde ibuye. Ngenxa yoko, abavelisi abaqhelekileyo sele benyuse imarike yomgubo we-tungsten ngamasuntswana aphakathi ngama-235 yuan/kg kunye nama-239 yuan/kg. Unikezelo lwethutyana, eyona meko yentengiselwano ixhomekeke kuqwalaselo olulandelayo.
Xa kuthelekiswa nolangazelelo lwemathiriyeli ekrwada, isantya esisezantsi siyacotha. Nangona iinkampani ze-alloy ziye zabika ngokulandelelana ukuba ziya kwandisa amaxabiso emveliso nge-10% okanye i-15% ngoJulayi, isizathu kukuba ngaphezu koxinzelelo olubangelwa yindleko yezinto ezibonakalayo ezifana ne-carbides, i-cemented carbide. izibophelelo zetsimbi, ezifana ne-cobalt, i-nickel, njl., Kwakhona enye into yokuqhuba kulo nyaka ngenxa yokunyuka okubukhali kwimfuno yamandla amatsha. Nangona kunjalo, sikholelwa ukuba, xa sijonga imarike yehlabathi, imfuno yemarike jikelele yeemveliso ze-tungsten iyaxhaswa. Indima ayicacanga. Nangona iBhanki yeHlabathi isandula ukuhlengahlengisa iGDP yaseChina ngo-2021 ukuya kwi-8.5%, ukuhlaziyeka kwakhona koqoqosho kwiimarike zaphesheya ezifana neemarike zaseYurophu nezaseMelika akulunganga njengeChina. I-GDP yase-US ngo-2021 iya kuhlala imalunga ne-2.5%, ngoko iya kunyuka ngokukhawuleza ngexesha elifutshane. Imarike yempahla ekrwada kunzima ukuba yamkelwe ngumlambo osezantsi.
Ishishini likholelwa ukuba idigri ehambelanayo yedatha eyinyani yemveliso kunye nentengiso kwimbonakalo yentengiso ayikaziwa. Ukuleqa ngobumfama ukunyuka akuncedi kwixesha elide kunye nokusebenza okuzinzileyo kweemarike. Ngokuchasene noko, kunokubangela ukugqwetheka, ukuqhawulwa kunye nokuvaleka kwamanye amakhonkco kunye namaxesha othungelwano lwemizi-mveliso, okuya kuchaphazela imigodi enyukayo kunye nemigodi esezantsi. Ukusebenza kwamashishini afana ne-alloys kuya kuzisa ingozi ethile.
Lilonke, ukuzithemba kwangoku kumantla nasezantsi kwekhonkco leshishini le-tungsten kuyahluka. Isiphelo sezinto ezikrwada sisukela, kwaye amanye amashishini arhoxise iikowuteshini, enethemba lokuba imbonakalo yentengiso iya kuba nenzuzo ngakumbi, kwaye izixhobo ezikumgangatho ophantsi kwimarike yendawo kunzima ukuzifumana; Isiphelo semfuno ngokucacileyo silumkile, kwaye isiphelo esisezantsi Umngcipheko wokutya uphantsi, ulangazelelo lokufumana isitokhwe esisebenzayo alikho phezulu, kwaye imibuzo yemarike ubukhulu becala iyimfuno nje. Lindela kwaye ubone umjikelo omtsha woqikelelo lweziko kunye nesikhokelo samaxabiso omyalelo wexesha elide ngoJulayi, kwaye eyona marike yentengiselwano ekupheleni kwenyanga ivaliwe.
Carbide Precision Tools, Izixhobo zeCarbide, IiMill zokuphela kweCarbide, Isixhobo seCarbide, ICarbide enesamente, Milling Cutter,